I-Cancer: izinkanyezi zesifo sezinkanyezi ekwindla 2013
Ukwindla ka-2013 kuzonikeza ama-Rakka amathuba amaningi ekuthuthukiseni kwabo, ukuthuthukiswa kobudlelwane bomshado, kodwa le kansela ingavimbela ukungaqiniseki nokungacabangi. Ngokuvamile, ekwindla kuzoba yi-wavy, nge-ups and downs.
Ekuqaleni kwekwindla, i-Rakov izoba nezikhathi ezinzima, kodwa izokwazi ukunqoba, futhi ngenzuzo.
USepthemba yisikhathi esihle sokufeza i-feat, ukufeza into eyayingenamandla ngokwanele ngaphambili. Ngokwesibonelo, vakashela ugogo wakho othandekayo, ubhalise ekliniki yokuzivocavoca, ulahle imikhuba emibi.
Ekupheleni kukaSeptemba, kungcono ukuthi ungaqali amaphrojekthi amasha, ngoba ngeke kwenzeke ukuqedela ibhizinisi, kuphela ulahlekelwe amandla akho nesikhathi sakho. Ungazivumeli ukuba usetshenziswe imvelo yakho. Kule nkathi ewusizo ukuba ube yi-egoist enempilo, futhi kungcono ukucabanga ngokuphumula kwakho.
Ekuqaleni kukaSeptemba, izivunguvane zilindele wena: umhawu, ukuthuthumela nokwethula. Ukuphila kwansuku zonke, ungathenga izinto zasendlini ezihlelwe isikhathi eside, kodwa ungabheki nezakhiwo.
Izihlobo zakho zizodinga izeluleko zansuku zonke ezigunyazayo noma olunye usizo nokusizwa. Futhi uzozidela izithakazelo zakho. Ukubheka okuhle kwe-crayfish kuzokhanyisa wonke umuntu ozungezile.
Engxenyeni yesibili yenyanga, ukuvumelana nokuqonda okuhambisanayo kusekelwe emndenini.
Umsebenzi kanye nezezimali
Izigameko emsebenzini uSepthemba ngeke abe nomdlavuza. Uzokwenza izinto zakudala uphinde ulungise amaphutha amade okude. Ungakwazi ukusungula ubuhlobo nabalingani bakho, funda okuthile okusha, ukushintshanisa isipiliyoni, ukuthuthukisa iziqu zakho.
Ngezezimali - unganqikazi ukubuyisela izikweletu kumuntu (umuntu noma isimo). Ngakolunye uhlangothi, imali oyiboleke kumuntu uzobuyela kuwe.
Ekhasini elibomvu tape, ukubambezeleka kungase kwenzeke, naphezu kwenhlalakahle jikelele. Engxenyeni yesibili kaSeptemba, i-crayfish izoba nempumelelo yezezimali.
I-Septhemba iyakwazi ukuqhuba i-yoga, imikhuba yokuphefumula nokuphathwa kwamandla, okuzokwenyusa ngokuphelele i-tonusorganism. I-Sanatorium kanye nokwelashwa kwe-spa kuzosebenza ngempumelelo.
Eminyakeni eyishumi yesibili yenyanga, qala ukuhlanza umzimba wezinyosi, ukwandisa imishanguzo kanye nokuqinisa konke okuphilayo.
Phakathi nalesi sikhathi kungcono ukungabandakanyeki ezinkambisweni zezimonyo, ukuhlela kangcono ubuhle bangaphakathi.
Phakathi kwekwindla yamaKhansela kuyakuba yisikhathi sokulwa, futhi bayolwa nabo. I-Cancer izozizwa ingqubuzana engekho yangaphakathi, ikakhulukazi emkhakheni wezobuchwepheshe.
Maphakathi no-Okthoba kuyodingeka wenze izinqumo eziphoqelela. Ngesikhathi esifanayo, i-tape ebomvu ephathekayo kungenzeka ngezincwadi eziyinkimbinkimbi. Ngo-Okthoba, nawe uzokhunjulwa ngezikweletu uma unayo. Futhi ngezimali, nakwezinye izibopho.
Ngo-Okthoba, indawo yokuhlala ngeke ikhululeke emibhalweni yomzwelo. Izidingo zakho nezimfuneko zabathandekayo bakho zizohluka. Futhi ingxabano ingavela ngenxa ye-puzzle encane. Ungacabangi ukuthi umphumela uzoba yilokho okufunayo, kule nkathi kuzodingeka uhlehlise.
Ebudlelwaneni bomshado, izingxabano eziningi ze-Spartner zingasombululwa ngezocansi. Ngo-Okthoba, i-libido yakho iphezulu futhi ifuna kakhulu.
Maphakathi no-Okthoba, ama-crayfish anganqoba ukunaka, izinkumbulo nemizwa edlule nemizwa. Kungenzeka ukuthi uzophendukela ebuhlotsheni besikhathi eside. Ngokuphathelene nezingane kuyoba ne-idyll ephelele. Ngendlela, ungakwazi ukwengeza umndeni.
Ngo-Okthoba, ukwelashwa komdlavuza emsebenzini kungenazinzile futhi kuguquke. Uzobona ngokomzwelo iziqondiso zobuholi bese usabela ekuhlulekeni kwethimba. Seluleka ukuba sibe lula futhi singathinti konke.
Ezindabeni zezezimali zomhlaba wezethembiso ukuzinza, phakathi nenyanga, ukutholakala kwemali okungalindelekile kungenzeka-amabhonasi, izipho, amabhonasi.
Engxenyeni yesibili, kungcono ukwenza umdlavuza ngokwakha indlu nokudala indawo ehlelekile. Izindleko ziyoba mnandi.
I-Cancer ingcono ukungazikhohlwa ngezifo ezingapheli, zingaba namandla. Ncoma umzimba wakho nge-calcium ukuqinisa uhlelo lwethambo. Ukulawulwa kwelanga nosuku lokudla okunempilo kuzokusiza ukujwayelekile umsebenzi wezinambuzane zamathumbu.
Umdlavuza wesifazane akufanele ungaphuthelwa isikhathi sokuqaliswa kwezinqubo zezimonyo. Ephumelela ngokukhethekile ngalesi sikhathi i-budutaromaterapiya, ama-tinctures nama-herbal teas.
Ngenyanga yokugcina yasekwindla, umkhuhlane weRocks uzoba nje ngaphandle kwefasitela, emiphefumulweni yabo iyoba nomlilo wokudala. Unquma ukuthi yini okuzofudumala ngalo mlilo: umsebenzi obalulekile wokusebenza, othandekayo noma ikhaya lomndeni. Izinkanyezi zithembisa ukuthi umdlavuza uyasebenza futhi ulungile ngoNovemba. Ungabi yize, ungalindeli ukuthi konke kuzoxazululwa ngokwayo. Lesi yisikhathi esihle sokuzibonakalisa wena, ukwandisa amakhono nokuthuthukisa amathalenta. Ekhuluma ngokuphindaphinda, ngoNovemba ama-crayfish alinda ukufaka kuzo zonke izinzwa.
Ezinsukwini eziyishumi zokugcina zikaNovemba, kuzuzisa ukubhekana nemisebenzi, ukubeka ukucaca nokuhleleka kukho konke okususelwe kuwe. Uma kungenjalo, isimo se-chaos singavimbela isiphetho esiyimpumelelo samacala. I-Chaos ingabangela ukugxeka kusuka kwabakhulu.
NgoNovemba, i-Cancers izobe isetshenziselwe ukuthandana nokuthanda. Kuwe cishe ngeke kube khona ukuhlukunyezwa kobulili obuhlukile. Ekuphileni komuntu siqu kuyoba nemicabango eminingi. Isikhundla seVenus sinokuthi i-rapporteur izokwakha ubuhlobo obusungulwe. Ubudlelwane nabantwana kanye nomuntu othandekayo buzobambelela futhi bukhuthaze i-crayfish. Kodwa-ke, izingane akufanele zilindele izimangalo, ngezinye izikhathi ama-avam kufanele aguqule isanqante esikhwameni. Kodwa lena inqubo evamile yokufundisa.
Ingxenye yesibili kaNovemba izothela i-spoonful kubudlelwane bomndeni wama-honey of crayfish. Izikhalazo ezindala zingabuya futhi kuvele umehluko. Zonke lezi zinhlanzi zizodlula emjikelezweni wesibili, bese zidweba ezinye iziphetho zodwa.
NgoNovemba, ama-crabs azokwazi ukuxazulula noma yikuphi, ngisho nomsebenzi wokukhiqiza owakhayo kakhulu ngenxa yokwethemba nokuphefumlelwa. Kungenzeka ukuthi phakathi nalesi sikhathi umdlavuza uzokwenza isinyathelo esizoshintsha umsebenzi wakhe wesikhathi esizayo.
Isimo sezezimali ngoNovemba kubamele abamele lesi sibonakaliso kuyoba yinto engathandekiyo: ukuthola imali, ukubonakala kwezinto ezingalindelekile zenkcitho. Injabulo ye-crayfish iyoba yilapho isivumelwano noma into abayifunayo isikhathi eside.
Ukuxoxisana kwebhizinisi kuzonikezwa umdlavuza kunzima kakhulu ngenxa yokulibaziseka kwezenhlalo kanye nokukhathazeka kwengqondo. Kodwa intuition izokusiza ukuba uzuze futhi uhambe ngokushesha.
NgoNovemba, izifo ezikhona ze-urinary system, izifo ezithathelwanayo, ngakho-ke qaphela.
Kodwa namanje akufanele uhlanganyele nezidakamizwa, uma ungenza ngaphandle kwazo, njalo. November uyisikhathi esihle sezinqubo zamanzi, ishayela ehlukile, imishanguzo, izinhlelo zokuvuselela umzimba ezizoba nomthelela omuhle esimweni semvelo.
Ungenza i-yoga, ekhuthaza ukuthuthukiswa ngokomoya nangokwenyama. NgoNovemba, njengenhlangano yonke, kuyoba nomusa wokuqonda ukuthula kwangaphakathi nokusebenza ngamandla angaphakathi.
I-Horoscope yeSagittarius Owesifazane ngo-June 2017
I-Horoscope ngo-September 2016 ye-Virgin
Yikuphi ukunambitheka okukufanisa ngesibonakaliso se-zodiac
I-Horoscope ye-Aquarius-Abesifazane ngo-2016 - uthando nangonyaka wokuzalwa
I-omelette e-Orange yebhangqwana
Indlela yokuthola imali eyengeziwe
Inyama emsanini wesinaphi
Inkanyezi yaseRussia uNastya Zadorozhnaya
I-Cocktail "I-Rum ne-Cream"
I-Salmon ibhaka ne-anyanisi nelamula
Isihlalo Sezimoto Zokukhula Izingane Ezincane
Umpheki wokugcoba - idivayisi yesimanje ekhishini owesifazane
Isikhathi sokubeletha siyona engcono kakhulu
Amandla okuzilawula, ukuzithiba
I-Horoscope Yezinhlanzi Zamadoda Ngo-2016 - uthando nomnyaka wokuzalwa
Indlela yokugcina isembatho sembobo se-mink
Indlela yokukhetha ingane yakho izingubo zasebusika
Umlingisi uMnuz Bennett: uMnumzane waseCapua ononya nobudlova